Zacharie 9 BDS – Sakaria 9 ASCB
Atemmuo A Ɛtia Israel Atamfoɔ
ɛfiri sɛ, nnipa ne Israel mmusuakuo nyinaa
2Na ɛbɛka Hamat a ɔne no bɔ hyeɛ;
ɛbɛka Tiro ne Sidon, ɛwom sɛ wɔyɛ anyansafoɔ.
3Tiro asi abandenden ama ne ho;
waboa dwetɛ ano te sɛ mfuturo,
ne sikakɔkɔɔ ano te sɛ dɔteɛ a ɛwɔ mmɔntene so.
4Nanso, Awurade bɛgye nʼahodeɛ nyinaa
na wasɛe ne tumi a ɔwɔ wɔ ɛpo so,
na wɔde ogya bɛhye no dworobɛɛ.
5Askelon bɛhunu na wasuro
Gasa de ɔyea bɛnukanuka ne mu,
na Ekron nso saa ara, ɛfiri sɛ nʼanidasoɔ bɛsa.
Gasa bɛhwere ne ɔhene
na wɔbɛgya Askelon afituo.9.5 Askelon…Gasa…Ekron: Filistifoɔ nkuropɔn mmiɛnsa. Nʼanidasoɔ bɛsa: Ɛsiane sɛ Ekron da Filistiman atifi pɛɛ enti, ɛno na ɛbɛdi ɛkan ahunu amane. Nʼanidasoɔ sɛ Tiro bɛgyina mu ama no ɔhaw anaa abɛbrɛsɛ bi mu no nkɔsi hwee so.
6Ananafoɔ bɛtena Asdod,
na mɛtwa Filistifoɔ ahantan agu.
7Mɛyi mogya9.7 Mogya—Ɛgyina hɔ ma abosom afɔrebɔ. Akyiwadeɛ nnuane—Nnapɔnna nnuane a ɛho nteɛ. Yebusifoɔ—Nnipa bi a wɔtenaa Yerusalem tete berɛ mu a wɔbɛfraa Yudafoɔ mu. (2 Sam 24.16-24). afiri wɔn ano,
akyiwadeɛ nnuane nso mɛyi afiri wɔn ano.
Nkaeɛfoɔ no bɛyɛ yɛn Onyankopɔn dea
wɔbɛyɛ Yuda ntuanofoɔ,
na Ekron bɛyɛ sɛ Yebusifoɔ.
8Nanso mɛbɔ me Fie ho ban
wɔ wɔn a wɔtetɛ bɔ korɔno ho.
Ɔhyɛsofoɔ biara ntumi mfa me nkurɔfoɔ so bio,
ɛfiri sɛ afei merewɛn.
Sion Ɔhene Ba
9Di ahurisie Ao, Ɔbabaa Sion!
Team, Ɔbabaa Yerusalem!
Hwɛ, wo ɔhene reba wo nkyɛn.
Ɔtene na ɔwɔ nkwagyeɛ,
ɔdwo, na ɔte afunumu so,
afunumu ba so na ɔteɛ.
10Mɛgye nteaseɛnam afiri Efraim
ne akofoɔ apɔnkɔ afiri Yerusalem,
na akodie tadua no wɔbɛbubu mu.
Ɔbɛpae mu aka asomdwoeɛ nsɛm akyerɛ aman no.
Nʼahennie bɛfiri ɛpo akɔka ɛpo
ɛbɛfiri Asubɔnten no akɔpem nsase ano.
11Na wo deɛ, ɛsiane me ne wo mogya apam no enti,
mɛyi wo nneduafoɔ afiri amena a nsuo nni mu.
12Monsane nkɔ mʼaban mu, Ao nneduafoɔ a mowɔ anidasoɔ;
seesei mpo merebɔ mo nkaeɛ sɛ mɛhyɛ mo anan mu mmɔho.
13Mɛkoa Yuda sɛdeɛ mekoa me tadua
Mɛkanyane wo mmammarima, Ao Sion,
atia wo Hela mmammarima,
na mɛyɛ wo sɛ ɔkofoɔ akofena.
14Afei Awurade bɛda ne ho adi wɔn so;
nʼagyan bɛtwa yerɛ te sɛ anyinam.
Otumfoɔ Awurade bɛhyɛn totorobɛnto no;
ɔbɛbɔ nsra wɔ atɔeɛ fam ahum mu,
15Asafo Awurade bɛyɛ ɛkyɛm ama wɔn.
Wɔde ahwimmoɔ bɛsɛe
Wɔbɛnom na wɔabobɔ mu sɛdeɛ wɔanom nsã;
wɔde pete afɔrebukyia ntweaso.
16Awurade wɔn Onyankopɔn, bɛgye wɔn saa ɛda no
sɛ odwanhwɛfoɔ gye ne nnwan.
Wɔbɛtwa nyinam nyinam wɔ nʼasase so,
sɛ aboɔdemmoɔ a ɛbobɔ ahenkyɛ ho.
17Sɛdeɛ wɔn ho bɛtwa na wɔn ho ayɛ fɛ afa!
Aduane bɛma mmeranteɛ anyini ahoɔden so
na nsã foforɔ bɛma mmabaawa anyini saa ara.
ASCB : Sakaria 9